Pole Fibre Carbon, Tube Fiber Carbon, Poll Telescopic Piber Carbon - Lanbao
Pole Fibre Carbon
Pole fakana voankazo
Fanadiovana ny tatatra
Pole fanasana fanerena avo
Fanadiovana tontonana amin'ny masoandro
Pole fanadiovana varavarankely
Izay lazain'ny mpanjifanay
Andry fibre karbonika
Water hybrid Blue Yellow Telescopic Water Wash Br ...
Fanamafisana ny varavarankely fibre karbaona avo lenta ...
Modulus avo fibre karibonetra azo ahitatra dia ...
Multifunction Fiberglass masoandro manadio tontonana p ...
ISO9001 Frp Square 15ft 20mm Tube Fiber Glass
12m Heavy Duty Fiberglass Poll Telescopic
Fantsona fibre karbaona samihafa ambonin'ny tany, 3K, 6K, 1 ...
Fantsona fibre karbona misy halava samy hafa, ...
100% Carbon fibre telescopic pou multifunction ...
Pao teleskopika fitaovana 45Ft Hybrid
Paingotra teleskopitra fibre karbôna 3k 12k ambonin'ny tany
Polisy fibreslaire fiberglass amin'ny fahamaotinana tsara ...
Polisy mpamonjy rano teleskopika 100% fibre karbonika
50FT teleskopika Long Reach Telescopic Water Res ...
Andry famonjena teleskaopika 25Ft miaraka amina fanidiana Telesc ...
18FT fantsom-pifangaroan-tsoavaly teleskopitra
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-24
Carbon Fiber VS. Fantsom-boanjo Fiberglass: Iza ...
Fantatrao ve ny mahasamihafa ny fibre carbon sy ny fiberglass? Ary fantatrao ve raha tsara kokoa ny iray noho ny iray hafa? Fiberglass dia azo antoka fa ny zokiny indrindra amin'ireo fitaovana roa ireo. Noforonina tamin'ny alàlan'ny vera mirehitra ary esorina ao anaty tsindry ambony izany, avy eo atambatra ireo kofehin-javatra vokarina amin'ny ...
Carbon fibre dia manolo ny aliminioma amin'ny fampiharana mihabe isan-karazany ary efa nanao izany nandritra ny am-polony taona vitsivitsy lasa izay. Ireo fibra ireo dia fantatra amin'ny heriny sy ny hamafiny miavaka ary maivana koa. Ny kofehin'ny fibre karbonika dia atambatra amin'ny resina isan-karazany mba hamoronana fitambarana ...
Inona no ampiasaina amin'ny fantsona fibre karbonika?
Fantsona fibre karbaona dia ilaina amin'ny rindranasa maro samihafa ny rafitra tubular. Noho izany, tsy tokony hahagaga raha mampiavaka azy ireo amin'ny indostria maro ny toetra mampiavaka ny fantsom-by fibre karbaona. Matetika kokoa, amin'izao andro izao, ny fantsom-by fibre karbaona dia manolo ny vy, titanium, na ...
Potsitra nomen'ny rano Fibre karbaona tonga lafatra ho ...
Ny mpamafa varavarankely sy fanadiovana matihanina ankehitriny dia manana ny haitao misy azy ireo izay efa am-polony taona talohan'ny teknolojia vao folo taona lasa izay. Ny teknolojia vaovao dia mampiasa fibre karbaona ho an'ireo andry fahano-drano, ary izany dia nahatonga ny asan'ny mpanadio varavarankely tsy mora kokoa fa azo antoka kokoa. Polisy famahan-drano dia ...
Inona no fitaovana ilain'ny mpanadio varavarankely?
Tsy asa mahazatra intsony ny fanadiovana varavarankely. Izy io dia natokana ho an'ireo matihanina izay manana fitaovana sy fitaovana mety hanadio ny varavarankely rehetra. Na te hanadio ny varavarankelin'ny tranonao ianao na hanokatra serivisy fanadiovana varavarankely dia ilaina ny mahafantatra ireo vokatra tena ilaina sy ny equi ...
Efa ho 15 taona ny traikefa amin'ny famokarana no manome toky ny vokatra.
Daxizhuang, Yangting Town, Distrikan'i Huancui, tanànan'i Weihai, Shandong, Sina